एकै टेबुलमा बसेर समाधानका उपायहरु खोज्नुपर्दछ « Sahakari Nepal
एकै टेबुलमा बसेर समाधानका उपायहरु खोज्नुपर्दछ
प्रकाशित मिति : 1 December, 2014 9:35 am
कोषाध्यक्ष–नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रिय सहकारी संघ
१ सहकारीको विकासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सहकारी विकासको बारेमा भन्नुपर्दा नेपालमा सहकारी शुरु भएको करिब ५७ वर्ष पूरा भएतापनि २०४८ को सहकारी ऐन पछि मात्र सहकारी, सहकारीको रुपमा संचालन भएको पाईन्छ । तदनुसार करिब २३÷२४ वर्षको सहकारी अभियानले सोचेभन्दा बढी विकास गरेको ठान्दछु ।
२ सहकारीले आर्थिक बिकासमा कत्तिको योगदान दिएको पाउनुभएको छ ?
सहकारी अभियानले जनतामा मुख्यरुपले सहयोग पु¥याएको पाटो नै आर्थिक हो । हिजो साहु महाजन गुहार्नु भन्दा अर्को विकल्प थिएन । मानिसमा सानो पैसा र फजुल खर्चलाई बचत गर्ने बानी थिएन । आज शहर बजार देखि गाँउ सम्मका मानिसहरुमा बचत गर्नुपर्दछ भन्ने भावना जगाएको छ । सानो तिनो कर्जा लिएर भएपनि आर्थिक उपार्जनमा कुनै न कुनै ढंगबाट मानिसहरु लागेको अबस्था छ ।
३ सहकारीको विकासका लागि राज्यको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सहकारी विकाशमा राज्यको भुमिका जति हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेको छैन । हुनत राज्यले नै सहकारी मार्फत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने पूर्ण रुपले विश्वस गर्न सकेको अवस्था छैन ।
४ सहकारीका समस्या बढीरहेका छन्, समस्या निराकरणका लागि के गर्नुपर्ला ? यसमा अभियानको भूमिका के हुन्छ ?
सहकारी भित्र मात्रै होईन जुनसुकै क्षेत्रमा पनि समस्याहरु देखि नै रहेको अवस्था छ समस्याहरु निराकरण गर्न सर्बप्रथम त समस्याको पहिचान गरि सरकार र अभियान एकै टेबुलमा बसेर समाधानका उपायहरु खोज्नुपर्दछ । यसमा अभियानको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । साथै अभियानलाई पनि सरकारले सहकारी यात्राको साझेदारी बनाउन जरुरी छ ।
५ सहकारीका नीतिनियम परिवर्तन गर्नमा अभियानको तर्फबाट के पहल भएको पाउनुभएको छ ?
सहकारीको नीति निर्माण परिवर्तन गर्न अभियानको भूमिका महत्वपुर्ण रहन्छ । २०४८ को ऐन पुनरलेखनमा अभियानले पटक पटकको छलफलमा सहकारी मैत्री ऐन ल्याउनको लागि अभियान र सरकार संगै मिलेर गएमा यसको कार्यान्वयन पक्ष मजबुद हुन्छ भन्ने सुझाव दिईरहेको अवस्था छ ।